WARARKA – Page 2 – Somnews
Qarax miino oo ciidamada maamulka hirshabeelle lagula eegtay duleedka magaalada jowhar
Warar dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayan qarax xoogan oo maanta ka dhacay duleedka magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe. Qaraxa oo ahaay miino nooca dhulka lagu aaso ayaa waxaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan…
Unicef oo shaacisay in 1.5 Million oo caruur soomaaliyeed ah ay wajahayaan macluul
Hay’adda Caruurta u qaabilsan Qaramada Midoobey ayaa si deg deg ah ugu baaqday in wax laga qabto Abaaraha ka jira Soomaaliya oo si weyn u saameeyay Caruurta , islamarkaana ay kuwo badani u dhinteen haddana kuwo kale ay qarka u saaran yihiin…
Muuqaal: Madaxweyne xaaf muxuu u tagay magaalada caabud-waaq?
Daawo: Madaxweyne farmaajo oo canaantay mid kamid ah ilaaladiisa oo shacabka handaday
Booliska magaalada London ayaa sheegay in ay rumaysan yihiin in todoba qof ay ku dhinteen 48 kalena ay ku dhaawacmeen wax ay ku tilmaameen fal argagixiso oo xalay ka dhacay magaaladaasi. Saddex qof oo looga shakisan yahay in ay ahaayeen…
Banaanbixii maanta ka dhacay muqdisho oo haween badan uu naqaska ku xirmay
Warar dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayan dad ku neef qabatoomay banaanbixii lagu taageeraayay boqolka maalmood ee xafiiska uu joogay madaxweyne farmaajo ee ka dhacay muqdisho. Dadka ku neef qabatoomay banaanbaxa ayaa waxa ay u…
Muqdisho, 04 June 2017.....Ra’iisal Wasaaraha Xukuumada Federaalka ah ee Soomaaliya Mduane Xasan Cali Kheyre oo ka qeyb galay bannaan-bax lagu taageerayay 100-kii maalmood ee ay jirtay Dawladda uu Hoggaamiyo Madaxweyne Maxamed C/laahi…
Madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmad ducaalle geelle xaaf ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada caabud-waaq ee gobolka galgaduud. Madaxweyne xaaf oo socdaalkiisa ay ku wehlinayeen mas'uuliyiin uu ugu horeeyo…
Diyaaraddo dagaal oo xalay warqaddo shabaab loogu digaayo ku daadiyay jubbooyinka
Diyaaraddo dagaal ayaa habeenkii xalay waxa ay warqaddo digniin ah ku daadiyeen deegaano iyo dagmooyin ka tirsan gobollada jubbada hoose iyo jubbada dhexe. Warqaddahaan ayaa waxaa loogu digaayay dagaalamayaasha alshabaab iyadoona…